Ukuhlaziywa kweSemalt kunokunyusa njani isikhundla sakho se-SEO
Ukuba ungabineshishini elikwi-Intanethi, kufuneka sele uqhelene nophando lweinjini yokukhangela, i-SEO. Ungumdibaniso wezinto zobugcisa kunye nezobugcisa ezingezizo ezobuchwephesha apho iiwebhusayithi zinokwenziwa zibekwe phezulu kwiziphumo zophando. Iiwebhusayithi ezilungiselelwe i-SEO zifumana iindwendwe ezininzi kwaye ke ngoko ziyafumana ngakumbi ukuthambeka. UGoogle kunye ne-Bing zezona iinjini zokukhangela ezaziwa kakhulu phaya. Ukuba ukhe wasebenzisa enye, uya kuyazi ukuba uninzi kunqabile ukuba bandwendwele iphepha lesibini ukufumana oko bakufunayo. Ke ngoko, ukhuphiswano lwephepha lokuqala ngokuchasene negama eliphambili lokukhangela luyoyikeka, ukutsho nje okuncinci.
Ukusukela kwiWeb2, umhlaba wetekhnoloji ubonile indaleko enkulu. Ayisiyiyo kuphela i-teknoloji entsha eguqukele kuluntu, ikwavumela namashishini kunye namaziko ukuba athathe izigqibo ezizizo xa kufikwa kumanyathelo abalulekileyo okwenza izigqibo. Ukugqitywa kwesizathu sesizathu sokuba bavunyelwe ukuba benze njalo. Isoftware yohlalutyo ilawula phantse yonke intsimi kunye nentengiso, nokuba yidijithali okanye ngenye indlela, yenze kakhulu kuyo.
I-Semalt Analytics yisoftware yohlalutyo lobuchwepheshe evumela abanini bamashishini abakwi-intanethi ukuba bakwazi ukulandela umkhondo wabo ngokufanelekileyo kunye nezikhundla zokhuphiswano nabo ngokubhekisele kwi-SEO kunye nokusebenza ngempumelelo kwentengiso. Ulwazi lwayo olupheleleyo nolwenziwe ngokuchanekileyo lweshishini livumela oosomashishini kunye nabanini bewebhusayithi ukuba baqonde ngcono: amandla oshishino abo, ebavumela ukuba bathathe izigqibo benolwazi kwaye babe ngaphambi komdlalo wabo.
Ukuba ujonga isoftware efanelekileyo yohlalutyo ekuncedeni ukonyusa umgangatho wewebhusayithi yakho, ke iSemal Analytics ilungile loo nto. Nantsi indlela uSemalt Analytics enokukunceda ngayo ukukhulisa amazinga akho e-SEO.
Ukuvavanya ukuqhubela phambili
Inyathelo lokuqala lokufezekisa nayiphi na injongo kukuba ube nomfanekiso ocacileyo wokuba indlela ekhokelela kule njongo ijongeka njani. Oku kuthetha, ukucacisa iinjongo ezicacileyo nezicacileyo ngokuchasene nomhla wokugqibela kunye nokusebenza nzima kwindlela elungileyo eya empumelelweni. Kwiiwebhusayithi, oku kuthetha ukuvavanya isikhundla sakho sangoku kwiwebhu kunye nokufumana ezinye iimetwork eziphambili ngokubhekisele kuzo zombini iphepha elingaphandle kunye ne-SEO kwiphepha.
Ukuhlaziywa kweSemalt kukuxhobisela ukuba ube nakho ukuhlalutya ngokupheleleyo isikhundla sewebhusayithi yakho kwindawo yokumela ishishini. Isoftware yohlalutyo ikunceda ukuba uqonde umgangatho wezinto zakho zangasemva kunye nezangaphakathi. Kuyanceda ukuthelekisa amaxesha omthwalo wephepha lakho kunye nabantu okhuphisana nabo 'kwaye kukunceda ukuba uqonde ngakumbi isixhumanisi sewebhusayithi yakho.
Ukuqonda ezi metrics kukuvumela ukuba ufumane indawo apho kufuneka ujolise khona kwaye kunceda ukujolisa ingqalelo yakho kunye namandla kuyo. Ukuba uSemalt Analytics uthi awunamanqaku aphezulu kwi-index-mobile yokuqala, ke kulapho kufuneka ugxile khona. Ukuba i-backlinks kwiiwebhusayithi eziphezulu ze-DA, ke uSemalt Analytics uya kukuxelela kanye loo nto.
Yenza ubuchule bokuKhokela
Ukuhlaziywa kweSemalt kunika amanyathelo okusebenza kwewebhusayithi yakho kwaye kukunceda uqonde amaxabiso engingqi yakho kunye newebhusayithi yakho okhuphisana nayo. Kukunceda ukuba uqaphele iipateni obungayi kuqaphela ukuba zibangela ukuba ube nolwazi ngakumbi malunga neshishini lakho, kwaye ikunike idatha yokujonga igumbi lokuphucula kunye nokwenza ubugcisa ekuhambeni.
Ngohlalutyo lwengingqi, ungabumba isicwangciso sakho sokuthengisa sibe yinto ekunika amathuba amahle okuphumelela kwindawo enikezwe kuyo. Iyawunciphisa umngcipheko wakho kwaye ikunika indlela ecacileyo yokusika kwinto ekufuneka uyifezekisile kwaye ikunceda uqonde ukuba ungayiphumeza njani. Ikwanceda ukwaba izixhobo zakho ngononophelo, ikuvumela ukuba ugcine ubutyebi bakho kwizinto ezibaluleke ngakumbi.
Gcina abaKhuphisana nabo kufutshane
I-Semalt Analytics ikunika ithuba lokuphumelela ngokuchasene nabantu abakhuphisana nabo ngokubonisa isikhundla sabo kwimarike enxulumene nesakho. Uyayazi into abayenzayo abakhuphisana nabo nendlela abayenza ngayo. Ii-analytics zingasetyenziselwa ukucwangcisa ngononophelo kwisicwangciso sakho sokubetha kwiindawo ezithile ezinokuvumela iwebhusayithi yakho ukuba inyuke ngaphezulu.
Ukuba umtsha ngokomgangatho, ukuqonda indlela abakhuphisana ngayo nabo kuya kukuvumela ukuba unyuke ngokukhawuleza. Ukuba uthatha isigqibo sokwenza uphando lwakho, kungakuthatha ixesha elininzi. Kodwa ngoSemalt Analytics, unokuziqonda lula izicwangciso zakho ze-SEO zokhuphiswano kwindawo yakho yokukhangela ekujolise kuyo ngokuchofoza nje ezimbalwa.
Isoftware yohlalutyo ikunika ukwazi ukubala inkqubela phambili yakho ngexesha. Usebenzisa esi sicwangciso, unokufumana ingxelo ngokusebenzayo kwiindlela zakho ze-SEO esele zikhona, kwaye wakhe indlela yokuphendula eyiphucula imigangatho yakho ngento nganye.
Idatha Ekulahleni kwakho
NgoSemalt Analytics, unokuguqula ngokulula idatha yohlalutyo ibe kwifomathi oyikhethileyo. Ngokucofa iqhosha ngokulula, idatha yakho inokukhutshelwa ngaphandle kwiifomathi zombini ze-Excel kunye ne-PDF ezikuvumela ukuba uveze ulwazi lwakho ngendlela enokufundeka ngabantu kunye nokwakha iingcaciso zamaqela akho kunye nabathengi.
NgoSemalt Analytics, unokuba namandla amaninzi wokuhlaziya onawo. Inezinto ezininzi ezenza ukhetho olukhulu kwiimfuno zakho zokuhlaziya.
Iingcebiso zamagama aphambili
Mhlawumbi eyona nto ibalulekileyo ye-SEO luphando lwamagama aphambili. Ukuchonga amagama aphambili afanelekileyo okujolisa kunye nokubeka iwebhusayithi yakho ngokuchaseneyo kunokwenzeka kuphela ukuba uyayiqonda ngakumbi indawo yokukhangela. Uphando lwamagama aphambili yinkqubo yoyilo efuna ixesha kunye nomzamo.
I-Semalt Analytics ikunika iziphakamiso zegama eliphambili ekuhambeni kwaye ikuvumela ukuba uqonde ngcono indawo yokukhangela. Ngeengcebiso eziphambili zelizwi eliphambili, inkqubo yakho ingahamba kakhulu.
Indawo yamagama aphambili
Ukugqiba ukuba yeyiphi na amagama aphambili oza kujolisa kuyo kwizinga lewebhusayithi yakho ephuculiweyo yinxalenye yomdlalo. UkuKhangela kweNjini yokukhangela yinkqubo elawulwa lingo kunye nempazamo. Kuphela kusemva kwengxelo oyifumanayo ngemizamo ye-SEO onokuthi ukwazi ukuyisebenzisa kakuhle. NgoSemalt Analytics, unokuvavanya ukuba wenza njani uphando lwakho lwegama eliphambili kwizikhundla zewebhusayithi yakho. Inika inani leendwendwe ezazibhekiswa kwiphepha lakho ngamagama aphambili. Kukunceda ukuba udale umxholo ophuhlayo ukuze ufumane eyona nto iphambili kwindlela yokukhangela.
Ukuqonda ixabiso lakho lophawu kunceda ukuba uhambe ngokubalwa malunga newebhusayithi yakho. Ikuvumela ukuba ubone ukuba iwebhusayithi yakho ibonwa njani ngababukeli, ikunika amandla okuhambisa iimveliso okanye iinkonzo ngomgangatho ofikelelekayo. Nge-Semalt Analytics, uphawu lwakho lophawu lubalwa ngokwenqanaba lokuthandwa kukunika ithuba lokusebenza kwisicwangciso sakho sokudibanisa kunye nokwandisa ulwazi njengoko kunokuba yimfuneko.
Njengoko usebenzisa isicwangciso sakho se-SEO, uya kudinga iimitha zamanani ukugweba indawo yakho yewebhusayithi ngoku ejikeleze amagama athile abalulekileyo. Ukuhlaziywa kwe-Semalt kukunika igama eliphambili lwewebhusayithi yakho ngexesha, ikuvumela ukuba ubone iipatheni onokuzibona ngenye indlela. Umqondiso obonakalayo wentsebenzo yakho unokwenza okuninzi okuhle xa kuziwa ekuyileni amacebo amatsha okuyila.
Indawo yokukhangela phantse ihlala ilawulwa kukhuphiswano. Kunzima ukuza ngegama lokukhangela elingalwalwa ngokunganyanzelekanga. I-Semalt Analytics i-Scouts ikhuphisana nabantu abakhuphisana nawe kwaye ikunike ukuqonda okucacileyo malunga nokuba zeziphi izikhundla zabo kwindawo yokukhangela; apho abomelele khona; kwaye kukho indawo yokuthabatha. Ngala manyathelo ohlalutyo, unokukhuphisana nabantu abakhuphisana nabo ngokuzithemba.
Iinjini zokukhangela ezinjengeGoogle zinefomula eyimfihlo abayisebenzisela ukubeka umgangatho kwiiwebhusayithi xa bekhangela. Nangona le algorithm iyimfihlo, kukho iindlela ezithile ezinikiweyo ukuba iiwebhusayithi kufuneka zidibane ukuze zilungele isikhundla esifanelekileyo. Ezi metrics zibandakanya ukufundeka, ukubaluleka komxholo kumazwi okukhangela, isantya sendawo kunye nezinye izinto ezininzi zobugcisa. Uhlalutyo lwe-Semalt luhlalutya iwebhusayithi yakho ukuze uqiniseke ukuba ihlangabezana neekhrayitheriya ze-SEO ngokupheleleyo, kwaye ayisweli nakweyiphi na indawo ephambili.
Ngena nje kwi-akhawunti yakho ye-Semalt Analytics kwaye uqalise iinkqubo zokuqokelela idatha. Isoftware iya kunika ingxelo eneenkcukacha ze-SEO yewebhusayithi yakho kunye nezo abo bakhuphisana nabo '. I-Semalt Analytics ngaxeshanye iphakamisa amagama angamagama okukhangela okudala kunye namagama onokuwasebenzisa ukukhulisa uluhlu lwakho lwe-SEO. Ikwenza oko ngokuqokelela idatha yonke imihla, ujikeleze indawo ekujongwa kuyo iwebhusayithi kunye nokuvavanya indlela yokuziphatha kwabasebenzisi kunye neendlela eziqhelekileyo zokukhangela.
Uhlalutyo luhlaziywa yonke imihla ukuze ungaze uphelelwe lixesha kwinto eyenzekayo kwisizinda sakho sokukhangela. Ngezihluzi ezahlukeneyo ezifumanekayo, unokuvala amagama athile aphambili ukwenza ukuba uphando lwakho lusebenze ngakumbi. Iimpawu ezinjengokuhlelwa kwamagama asezitshixo zinokukhulisa imveliso yakho.
Ukuhlaziywa kweSemalt kukunika amandla okuthatha idatha kunye nohlalutyo kwaye ubabonise ngeendlela zokuphelisa ze-API zika-Semalt. Misela ngokulula iziphelo kwaye ubonise idatha yakho yohlalutyo kumthombo wakho owukhethileyo.
Ukubeka umgangatho kwiwebhusayithi ezingcono kwiinjini zokukhangela, i-SEO kufuneka yenziwe. Yinkqubo yokuyila nobugcisa efuna ixesha kunye nomzamo. Nge-Semalt Analytics, i-SEO yewebhusayithi yakho inokwenziwa ngendlela efanelekileyo, ikunike ixesha kunye nokuguquguquka kugxile kwisicwangciso kunye nokuyila. I-Semalt Analytics ikunceda ukufezekisa iinjongo zakho ze-SEO ngokuchofoza nje ezimbalwa.